Back Stories ofarider. (ပြိုင်ပွဲနောက်ကွယ်က စက်ဘီသမားတဦးရဲ့ အတွေးစများ) ~ Htet Aung Kyaw
Back Stories ofarider. (ပြိုင်ပွဲနောက်ကွယ်က စက်ဘီသမားတဦးရဲ့ အတွေးစများ)
Back Stories ofarider.
(ပြိုင်ပွဲနောက်ကွယ်က စက်ဘီသမားတဦးရဲ့ အတွေးစများ)
ဥရောပနဲ့ အမေရိကားမှာကျင်းပနေတဲ့ နုိုင်ငံတကာ စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲတွေကို TV မှာကြည့်ရင်း၊ အင်တာနက်မှာရှာဖတ်ရင်းနဲ့ မြန်မာစက်ဘီးလောက အကြောင်းတွေးမိပါတယ်။
(Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo ရဲ့ နေ့လည်စာ၊ မြန်မာတွေစားသလုို ဖီကြမ်းငှက်ပျောသီးတော့ မတွေ့မိပါ)
ပထမ ဆုံးတွေးမိတာ နုိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Pro စက်ဘီးအသင်းတွေ ဖွဲ့နုိုင်ရေး ပါ။ အဲဒီထက်အဆင့်လျော့စဉ်းစားရင် အာဆီယံဒေသအဆင့်မီ Pro အသင်း တွေဖွဲ့ရေး၊ အဲဒါကိုမလုပ်နုိုင်သေးရင်တောင် ပြည်တွင်းမှာ Pro အသင်းဖွဲ့ရေး များလုပ်နုိုင်မလားလုို့ပါ။
မြန်မာနုိုင်ငံမှာ Pro အသင်းတွေရှိနေပြီးသားဖြစ်ရဲ့နဲ့ စာရေးသူမသိတာဆုိုရင် တော့ ဆောရီးပါ။ ဒီစာမျက်နှာကိုဝင်ဖတ်နေကြတဲ့ စက်ဘီးသမားတွေက ကျ နော့်ဆီ ထင်မြင်ချက်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကလည်း Pro အသင်းတွေမရှိခြင်းနဲ့ပဲ ဆက်စပ်နေမလားပါပဲ။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ စက်ဘီးအသင်းတွေ၊ စက်ဘီးတင်တဲ့ကားတွေ မတွေ့မိသေးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အားက စားပွဲအကြို စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲဆီ ကျနော်ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာထဲမှာ နေ့စဉ်လုိုလုိုပုံတွေတင်နေတဲ့ မော်လမြိုင်က ကိုဖုိုးအောင်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ပါ။
မြန်မာအသင်းစီးတဲ့စက်ဘီးတွေဟာ နုိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သိန်း ၃၀-၄၀ တန် ကာဘွန်ဘီးတွေဖြစ်ပေမယ့် ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလုို စက်ဘီးကိုထောက်ပံ့တဲ့ အပြင်အဆင်၊ အခင်းအကျင်းတွေကတော့ လုိုနေဆဲပါ။ ထားတော့။ ဒါက တဖြေးဖြေးဖြစ်လာမှာပါ။ မြန်မာက အခုမှ နုိုင်ငံတကာလမ်းမပေါ်တက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်တုန်းမဟုတ်ပါလား။
နုိုင်ငံတကာပွဲတွေကိုကြည့်ရင်း ပထမ ဆုံး သတိထားမိတာက ရေဗူးတွေကို တခါသုံးပြီးလွှင့်ပစ်လုိုက်တဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ။ အခုခေတ် မြန်မာစက်ဘီးသမားတွေ ဘယ်လုိုသုံးနေလဲတော့မသိပါ။ ၁၉၈၈ ၀န်းကျင် ကျနော်တုို့စက်ဘီးသမားဘ၀ ကတော့ ရေဗူးတလုံးကို ၁၀၀၊ ၁၅၀ ကျပ်နဲ့ဝယ်ရလုို့ တခါသုံးပြီးလွှင့်ပစ်ဖို့ ဆုိုတာ ဘယ်လုိုမှမဖြစ်နုိုင်ပါ။ အဲဒီအချိန်က တလုံးအတွက် ကျောင်းစရိတ်က ကျပ် ၃၀၀ ပဲရှိတာပါ။
နုိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာတော့ ရေကုန်တာနဲ့လွှင့်ပစ်၊ အသစ်ဗူးတွေကို ကုိုယ်ရဲ့ အသင်းကားကနေလာပေး၊ သုို့မဟုတ် အသင်းဖေါ်တဦးဦးက နောက်မှာနေ ခဲ့ပြီး အသင်းကားဆီက ရေဗူးတွေယူကာ အသင်းသားတွေကိုလုိုက်ပေးပေါ့။ ရေဗူးကအစ သူ့သက်ဆုိုင်ရာ အသင်းတံဆိပ်တွေနဲ့။
ပြီးတော့ အစားအသောက်ပေးတဲ့ Feed လုပ်တဲ့နေရာမြင်ကွင်း။ မြန်မာနုိုင်ငံ က တာဝေးပွဲတွေမှာလည်း အဲဒီလုိုအစားအသောက်ပေးတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသင်းနဲ့ကုိုယ်ပေးနုိုင်တာမျိုးမဟုတ်။ အား-ကာ တာဝန်ရှိသူ တွေကပေးတဲ့ဟာ သင့်သလုိုသာ ယူဖြည့်ပေတော့။
အစာထည့်ထားအိတ်ကလည်း တခါသုံးပါပဲ။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာစက်ဘီးစီးနေစဉ် တုန်းကတော့ နုိုင်ငံတကာပွဲလည်းမကြည့်ဖူးတော့ ဒါတွေကိုမသိဘူး။ ရှေ့မှာ ညွန်းခဲ့တဲ့ မော်လမြိုင်က ကျနော့်ဆရာ ကိုဖုိုးအောင်က ငှက်ပျောသီး (ဘာ ကြောင့်မှန်းမသိ၊ မြန်မာပြည်က အားကစားသမားတွေက ဖီးကြမ်းပဲစားကြ ပါတယ်၊ ဥရောပမှာတော့ ဖီကြမ်းသီးကိုတောင် မတွေ့မိပါ)နဲ့ တခြားစားစရာ အနည်းအကျဉ်းထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကိုယူပြီး အမြဲတန်းလွယ်ထားတော့ ပွဲ အစ အဆုံး ဒီလုိုပဲ လွယ်ထားရတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေါ့။
မလွယ်လုို့လည်းမရဘူးလေ။ လမ်းမှ ရေပြတ်ရင်၊ စားစရာပြတ်ရင် ကုိုယ့်အ သင်းကားတွေ၊ ဆုိုင်ကယ်တွေမရှိတော့ လုိုသမျှအားလုံး ကိုယ်နဲ့တပါတည်း ယူသွားမှ စိတ်ချရတော့မပေါ့။
စက်ဘီးစီးရင်းနဲ့ အီးအီးပါချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်နေတဲ့ စက်ဘီးသမားတွေထဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်နေရင်းနဲ့ အီးအီး ပါဖူးသူ ရှိပါသလား။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ ပြိုင်ပွဲဆီ အာရုံစုိုက်ထားတဲ့အတွက် အီးအီးဖက် သိပ်အာရုံလာလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဥရောပကပွဲတွေလုို တနေ့ ကုို ကီလုို ၂၀၀ ကျော်၊ သတင်း ၃ ပတ်လောက်စီးမယ်ဆုိုရင်တော့ ပြိုင်ပွဲအ တွင်း အီးအီးပါချင်သူရှိရင် ရှိလာမှာပေါ့။
Tour de France ပြိုင်ပွဲအတွင်း အီးအီးမအောင့်နုိုင်တဲ့ စက်ဘီးသမားတဦး ဟာ လမ်းဘေးက အပန်းဖြေယဉ် (အပန်းဖြေကားတွေမှာ အိမ်သာလဲပါ ပါ တယ်) ထဲအတင်းပြေးဝင်ပြီး အိမ်သာတက်တာကို သတင်းဟာသအဖြစ်ပြ တာတွေ့လုိုက်ဖူးပါတယ်။
တချိန်လုံး TV က လုိုက်ဖ်ပြနေတာဆုိုတော့ အီးအီးပါဖုို့မလွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်ပွဲမှာတော့ ဘရူးနုိုင်းကစက်ဘီးသမားထင် တယ်။ ပန်းဝင်ဖို့ ၁၀ ကီလုိုလောက်အလိုမှာ အီးအီးမအောင့်နုိုင်တော့လို့ဆုိုပြီး စက်ဘီးကိုလမ်းဘေးချ၊ တောထဲပြေးဝင်သွားပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာက ၀န်ကြီးဌာနတခုနဲ့တခုကြား တောတွေကခပ်ထူထူဆုိုတော့ ဘယ် တီဗွီ က မှ ဒီအကွက်ကုို မရလုိုက်ပါ။
ဒါက အီးအီးကိစ္စ။ အီးအီးပါသူ မရှိသလောက်နည်းပေမဲ့ ရှုးရှုးပေါက်သူကတော့ အတော်များပါတယ်။ တနေ့ကုို ၄-၅ နာရီစက်ဘီးပေါ်ထုိုင်နေရတာဆုိုတော့ ဘယ်အောင့်ထားနုိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် ရပ်ပြီးပေါက်နေရင် နောက်ကျကျန်ခဲ့ မှာစုိုးတော့ သွားရင်းနဲ့ရှုးရှုးပေါက်တဲ့နည်းတွေကို စက်ဘီးသမားတွေ ကျင့်ထား ရပုံပါပဲ။
တချို့ဆုို အသင်းလုိုက်တန်းစီပြီး တဦးလက်တဦးကုိုင်ဖေးမရင်းနဲ့ သွားရင်းပန်း သွားတာ TV မှာ မကြာခဏမြင်နေရပါတယ်။ တချို့ကတော့ အုပ်စုလုိုက် လမ်း ဘေးတလျောက်တန်းစီပြီး စက်ဘီးကိုခွာက ပေါက်တောလုပ်ကြပါတယ်။ ကင်မရာသမားတွေကလည်း ဒါမျိုးကုို နောက်ကျောကနေပဲ ခပ်ဝါးဝါးရုိုက်ရင်း ဟာသ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
စက်ဘီးစီးရင်း နေ့လည်စာ သုံးဆောင်သူများ
အခု အီတလီမှာကျင်းပနေတဲ့ သတင်း ၃ ပတ်ကြာ Giro d'Italia ပြိုင်ပွဲအပါဝင် ပွဲကြီးမှန်သမျှဟာ နေ့လည်ပုိုင်းစီးကြတာမို့ စက်ဘီသမားအားလုံး နေ့လည်စာ ကုို စက်ဘီးစီးရင်းနဲ့ စားသုံးကြရပါတယ်။ စက်ဘီးစီးအကျီနောက်ကျောက အိပ်ကပ် ၃ ခုစလုံးမှာ အဲဒီအစာတွေနဲ့ပြည့်လုို့ပေါ့။
စက်ဘီးစီးတာကို ဒုက္ခခံနေသူများအဖြစ်နောက်ပြောင်လေ့ရှိတဲ့ ကျနော်မိတ် ဆွေတဦးကတော့ TV ပေါ်က စက်ဘီးသမားတွေကိုကြည့်ရင်း ''မင်းတုို့ စက်ဘီးသမားတွေကလည်း အရင်ဘ၀က ဘာဝဋ်ရှိလည်းမသိဘူး။ ထမင်းစားချိန်လည်း မနားရ၊ ရေသောက်ချိ်န်မှာလည်း ထွက်ပြေးကြနဲ့'' ဆုိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်။ ကုိုယ့်ဒုက္ခကုိုယ်ရှာသူတွေပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ရင်း အစာစားတယ်ဆုိုတာကလည်း ကုန်းတက်၊ ကုန်းဆင်းမရှိတဲ့အချိန်၊ အကွေ့ အကောက်မများတဲ့အချိန်တွေကိုရွေးပြီးစားရတာ။ စားနေချိန်မှာ လက်တဖက် ကလွတ်ထားရတာဆုိုတော့ မတော်လုို့ချော်လည်းသွားရင် အစားမက်လို့ ချော် လဲတာဆုိုပြီး အပြောခံရနုိုင်ပါတယ်။
တခါ ကိုယ်စားနေချိန်မှာ အခြားပြိုင်ဖက်တွေက အရှိန်တင်ပြီးထွက်ပြေးမသွား အောင်လည်း ဘေးပတ်လည်ကိုကြည့်ရပါသေးတယ်။ မုိုးရွာပြီး လမ်းလျော်နေ ရင် အခြေအနေက ပုိုဆုိုးပေါ့။
...(လောလောဆယ် စဉ်းစားမိသလောက်ရေးလုိုက်တာပါ။ ဆက်လက် တင်ပြပါဦးမည်...)။